Kenya oo looga digay in ay xirto xeryaha qaxootiga – SOOMAALPEDİA
Hay’adaha Caalamiga ah oo ay ku jiraan Dhakhaatiirta aan xaduuda lahayn MSF, Human Rights Watch iyo Amnesty ayaa qoraal ay kasoo saareen baaqii shalay kasoo baxay dowlada Kenya oo ku goodisay inay xiri doonto xeryaha Dhadhaab iyo Kaakuma.
Liesbeth Aelbrecht oo ah madax MSF ee Kenya ayaa sheegtay in markale hadalka kasoo baxay Kenya ay cadeenayso in aan wax tixgelin ah lasiineyn nololsha dadka qaxootiga.
Go’aanka Kenya ka soo abxay ayaa lagu sababeeyey mid culey dhaqaale mid amni iyo weliba dhibaatooyin ka dhashey deegaanka. Sidaas waxaa lagu sheegay War-saxaafadeedka ka soo baxay Wasaradda Arrimaha Gudaha waxaana ku saxiixnaa Madaxa xog-hayaasha Dr.Karanja Kibicho.
Hay’adaha caalamiga ah ee jawaabta kasoo saaray baaqa Kenya ayaa ku tilmaamay xiritaanka xeryaha qaxootiga mid ka horimaaneysa sharuucda caalamiga ah ee u daryeelida Qaxootiga, isla markaana halis gelin doonta nolosha boqolaal kun oo qaxootiga goobahaasi ku nool.
MSF ayaa sheegtay inay kaalin weyn ka geysato daryeelka iyo caawinta qaxootiga ku xareysa xeryahaasi oo kamid ah kuwa adduunka ugu waaweyn. Sidoo kale hay’adaha xaquuqul insaanka ayaa sheegay inaysan jirin wax cadeyn ah oo sheegaysa in kooxaha argagaxisada ay ku sugan yihiin xeryahaasi, mana jiraan wax xiriir ah oo ka dhaxeeya qaxootiga iyo Al Shabaab ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay hay’ada Human rights Watch.
Dowlada Kenya ayaa marar badan ku hanjabtay inay xiri doonto xeryaha qaxootiga balse illaa iyo hada laguma guuleysan.
Kenya ayaa ka cabanaeysa in heshiiskii sadex geesoodka ahaa ee wada saxiixdeen Qaramada Midoobay, Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee dib u celinta qaxootiga aan la dhaqan gelin.